Ọdịdị | January 2020
Otu esi eji Audacity
Onye nchịkọta akụkọ na-ewu ewu nke Audacity dị mfe ma kwụ ọtọ n'ihi ntanetị enyi ya na interface Russia. Ma, ndị ọrụ na-emetụbeghị ya nwere ike inwe nsogbu. Usoro ihe omume ahụ nwere ọtụtụ njirimara bara uru, anyị ga-anwa ịgwa gị otu esi eji ha.
Esi eji Audacity mee ihe
Ọtụtụ mgbe enwere ọnọdụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ idezi faịlụ faịlụ: belata okwu ma ọ bụ ụdaolu maka ekwentị. Ma ọbụna ụfọdụ n'ime ọrụ ndị kachasị mfe, ndị ọrụ na-emebeghị ụdị ihe a nwere ike inwe nsogbu. Maka edezi ihe ndekọ vidio na-eji mmemme pụrụ iche - ndị editọ ọdịyo.
Esi ewepu mkpọtụ na Audacity
Ọ na - eme mgbe ị na - edekọ ụda ahụ na - adịghị na ụlọ ihe nkiri ahụ na ndekọ ahụ, enwere ụda olu na - egbutu ntị. Noise bụ ihe ebumpụta ụwa. Ọ dị n'ebe niile na n'ihe ọ bụla - pịa mmiri mmiri na kichin, ụgbọala na-ebigbọ n'èzí. Na ụda na ihe ndekọ ọ bụla, bụrụ ya na igwe ịza ma ọ bụ ihe egwu egwu na diski.
Esi edeputa ụda site na kọmputa site na Audacity
Isiokwu a ga-ekwu banyere otu esi edepụta ụda sitere na kọmpụta na-enweghị igwe. Usoro a na - enye gị ohere idekọ ụda site na isi iyi ọ bụla: site na egwuregwu, redio na Intanet. Iji dekọọ, anyị na-eji usoro ihe omume Audacity, nke nwere ike ide ụda n'ụdị dị iche iche na site na ngwaọrụ ọ bụla na usoro.
Otu esi echekwa mp3 song na Audacity
Site na enyemaka nke Audacity ọdịyo editọ ị nwere ike ime ka elu-ogo nhazi nke ọ bụla egwu egwu. Ma ndị ọrụ nwere ike ịnwe nsogbu ịchekwa ntinye ederede. Ụdị ọkọlọtọ nke Audacity bụ .wav, ma anyị ga-elekwa anya iji zọpụta n'ụdị ndị ọzọ. Ụdị olu dị egwu kachasị mma.
Otu esi ejikọta abụ abụọ na Audacity
Taa, anyị ga-agwa gị otu esi ejikọta abụ abụọ na otu site na enyemaka nke usoro Audacity. Gụọ na. Mbụ ị chọrọ ibudata ngwugwu nkesa nke usoro ihe omume ahụ ma wụnye ya. Download Audacity Install Audacity Na-agba ọsọ faịlụ ahụ. Echichi na esoro ntuziaka na Russian. Ịkwesịrị ịnakwere nkwekọrịta ikike ma zipụta ụzọ ntinye maka usoro ihe omume ahụ.
https://termotools.com ig.termotools.com © Ọdịdị 2020